गनापुरमा यसरी तयारी हुँदै छ अम्बे स्टिल उद्योग (तस्वीर सहित) - Arthapage
गनापुरमा यसरी तयारी हुँदै छ अम्बे स्टिल उद्योग (तस्वीर सहित)
प्रकाशित मितिः २४ बैशाख २०७६, मंगलवार १६:०५ May 7, 2019
बाँके (गनापुर), २४ बैशाख : जानकी गाउँपालिका–६ मा अम्बे समूहको अम्बे स्टिल उद्योगको पूर्वाधार निर्माणको काम यतिबेला धमाधम भइरहेको छ । ‘फिनिसिङ्ग’ को काममा दैनिक तीन सय मजदुर खटिएका छन् । यसरी नै काम अघि बढे असार महिनादेखि उक्त उद्योगले दैनिक सात सय मेट्रिक टन फलामे छड उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
जुन पश्चिम नेपालमै सबैभन्दा ठुलो छड उत्पादक उद्योग बन्दै छ । अम्बे समूहको रुपन्देहीमा पहिल्यैबाट स्टिल उद्योग सन्चालनमा छ । तर त्यो भन्दा अहिले गनापुरमा बन्दै गरेको उद्योगको उत्पादन क्षमता झण्डै दोब्बर हो । ‘पूर्वाधार फिनिसिङ्गको काम गरिरहेका छौं ।’ –जय अम्बे स्टिल उद्योगका फ्याक्ट्री इन्चार्ज अनुज कुमार श्रेष्ठले भन्नुभयो–‘असारबाट उत्पादन सुरु गरिहाल्ने लक्ष्य राखेका छौं ।’
देशकै प्रतिष्ठित औद्योगिक समूह अम्बेले रु ३ अर्व लगानीमा डेड वर्षदेखि गनापुरमा स्टिल उद्योगको पूर्वाधार निर्माणको काम गरिरहेको छ । उक्त उद्योग पूर्णक्षमतामा सन्चालन हुँदा दैनिक सात सय मेट्रिक टन फलामे छड उत्पादन गर्नेछ । तर सुरुवातको चरणमा क्षमता अनुसार उत्पादन हुने गाहे पर्ने प्राविधिकहरु बताउँछन् । उक्त उद्योगले ८ एमएमदेखि ४० एमएमसम्मको छड उत्पादन गर्नेछ । ४० एमएमको छडहरु जलबिद्युत आयोजना जस्ता ठुला पूर्वाधार निर्माणको काममा लगाउन प्रयोग हुन्छ । जलबिद्युत आयोजना जस्ता कामहरु बढ्दै गएकाले उक्त छडको माग बढ्ने देखेर अम्बे स्टिलले उत्पादन गर्न लागेको हो ।
अम्बे समूहको रोजाईमा नेपालगन्ज किन ?
अम्बे समूहले नेपालगन्जमा यतिका ठुलो उद्योग किन खोेल्यो ? भन्ने प्रश्नको सटिक जबाफ दिदै श्रेष्ठले भने,–‘पश्चिम नेपालमा पुर्वाधार विकासका काम भइरहेका छन् अझ धेरै त हुन बाँकी नै छन् । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सामाग्रीको आपुर्ती पूर्वी नेपालबाट लैजानुभन्दा यही उद्योग खोल्दा प्रभावकारी हुन्छ ।’ पश्चिम नेपालमा पूर्वाधार विकासको प्रशस्त सम्भावना देखेर र त्यसको ‘ट्रान्जिट’ नेपालगन्ज भएकाले यहाँ उद्योग स्थापना भएको हो । सीमा नाका नजिक हुनु र भारतबाट कच्चापदार्थ भित्रा्उन सहज हुने भएका कारण पनि गनापुरक्षेत्रमा उद्योग खोल्ने क्रम बढेको छ ।
रोजगारमा के फरक छ ?
अम्बे समूह पुर्नरुपमा सन्चालन हुँदा दक्ष र अदक्ष गरी चार सय जनाले रोजगारी पाउने छन् । अम्बे समूहले नेपालीलाई रोजगारीका लागि उच्च प्राथमिकता दिने जनाएको छ । तर छड उत्पादन जस्तो प्राविधिक बिषयमा तत्काल दक्ष जनशक्ति पाउन मुस्किल हुने अवस्था भए अन्यत्रबाट कामदार मगाउनुपर्ने बाध्यता छ । तर पनि उक्त उद्योग सन्चालन पछि धेरैले रोजगारी पाउने निश्चित छ ।
प्रकाशित मितिः २४ बैशाख २०७६, मंगलवार १६:०५ |
Prevआज कोशेली घरको उद्घाटन हुँदै
Nextमहिला उद्यमीको सक्रियामा खुल्यो कोशेली घर